Hermetic mapakeji Vagadziri & vanotengesa - China Hermetic Mabhokisi fekitori
Zvichingotaura, chinangwa cheiyo opto-yemagetsi pasuru ndeyekuchengetedza hunhu hwakasimba munzvimbo dzakanyanyisa panguva imwe chete uchisimbisa yakaderera yekuisa yekuisa kurasikirwa. Jitai inogadzira opto-yemagetsi mapakeji mune akasiyana maumbirwo uye saizi ayo anoenderera mberi kusiyaniswa nemazhinji opto-chiteshi dhizaini sarudzo. Isu tinosarudza kubva kune yakawanda yekuumba uye yekugadzira nzira dzakanakisa sutu yekugadzira zvinodiwa.
Simba mapakeji anokurudzirwa kumapurojekiti uko kwakanyanya kupisa kupisa kwakakosha. Kazhinji Jitai inoshandisa komputa yekuverenga kudzora (CNC yekugaya) yeiyo imba yakarukwa nzvimbo. Nekudaro, isu tine huwandu hwakawanda hwesarudzo dzekushandisa dzinotigonesa kugadzira uye kugadzira yakasarudzika yakasarudzika yemapakeji etsika kuti akwane chero chero chirongwa. Izvo zvakanakira emagetsi mapakeji anoshanduka dhizaini sarudzo, kutendeuka kushoma kwekugadzira, uye kuvimbika kwakanyanya munzvimbo inonetsa ...
Microwave mapakeji chinhu chikuru chezvatinoita paJitai. Isu tinogadzira akasiyana eRF mapakeji ane yakafara frequency kugona. Jitai mapakeji anovimbisa kuti zvinodikanwa zvehurefu hwakakwira, kugona kwekupisa, uye hermeticity zvese zvinogutsikana nemhinduro dzinodhura. Isu tine zvivakwa zvekugadzira uye kugadzira zvizere zvakagadziriswa mhinduro kune ese marudzi emisika. Jitai iri-mumba yekudyara dhipatimendi inokwanisa ese emagetsi uye electrolytic maitiro anotigonesa kudzora ...
Jitai yakawedzera mutsara-up wemapakeji eHybrid Yakabatanidzwa Maseketi anosanganisira zvigadzirwa senge chikuva uye padivi pemapakeji. Dzimba dzekunze dzinoumbwa nekuchinjika kwechimakanika, icho chine mukana wepamusoro pekugadzira kugona uye nekudaro chakakodzera kugadzirwa kwemazhinji. Pini dzinodhonzwa dzakatwasuka kubva pasi, kazhinji mumutsara-miviri kana mana-mitsara kurongeka, inokodzera kuiswa-plug-in. Dual Inline mapakeji (DIP) kana Quad Inline mapakeji akagadzirirwawo plug-in asse ...
Aluminium Alloy Packages SHORT DESCRIPTION: Zvakanakira aruminiyamu chiwanikwa uremu hwayo, simba rakasimba, uye iko nyore kwainogona kuumbwa. Saka nekudaro inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira kwemagetsi kurongedza. ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA: Yakakwira kudziya inoitisa • Kuderera kwakadzika MUENZANISO KUNYANYA KWEZVINHU ZVAKAWANDA / × 10-6 / K KUITIKA KWEMAHARA / W · (m · K) -1 KUZIVA KWA / g · cm-3 A1 606 ...
Sensor misoro inofanirwa kumira munzvimbo dzakaomarara dzinoonekwa nekushushikana kwepanyama sekumanikidza kwekumanikidza, kushamisika kwemafuta, uye kudedera apo iwo magetsi emukati ari mukati anoramba achikwanisa kuendesa ruzivo nguva dzose kubva kumagetsi emagetsi. Izvi zvigadzirwa zvinowanzo gamuchira nzira yekumanikidza yekuisa chisimbiso. Zvisimbiso zvakagadzirirwa kuti zvidzivirire kumanikidzwa kwakanyanya (anosvika mazana matatu emabhawa) uye nekudaro zvinokodzera maseru anofanirwa kutsungirira mhando yemamiriro ekunze. Jitai's ...